Airbnb sy Government of Quebec dia nanambara ny fifanarahana momba ny hetra momba ny fizahan-tany voalohany any Canada
Home » Lahatsoratra farany farany » Hospitality Industry » Airbnb sy Government of Quebec dia nanambara ny fifanarahana momba ny hetra momba ny fizahan-tany voalohany any Canada
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Hospitality Industry • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Aogositra 29, 2017
Airbnb sy ny Governemantan'i Quebec dia namarana ny fifanarahana fandefasan-ketra voalohany tany Canada, izay ahafahan'ny Airbnb manangona sy mamerina ny haba amin'ny trano honenana amin'ny anaran'ny mpampiantrano amin'ny sehatra fizarana trano.
"Amin'ny maha-fifanarahana hetra voalohany eto amin'ity firenena ity, ity dia fampilazana manamarika ary fotoana voafaritra ho an'ny Airbnb any Canada," hoy i Alex Dagg, Public Policy Manager ho an'i Canada. "Ny fifanarahana tany Quebec dia ohatra iray amin'ny fomba ahafahan'ny Airbnb sy ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta miara-miasa."
Manomboka amin'ny 1 Oktobra 2017, Airbnb dia hanangona avy hatrany ary hametraka ny hetra 3.5 isan-jato amin'ny trano fandraisam-bahiny natao tany amin'ny faritra fizahan-tany 22 any Quebec izay nahatonga ny fizotrany tsy ho voadinika sy mora ho an'ny mpampiantrano sy ny faritany.
Tamin'ny taona lasa, Airbnb dia nanohana vahiny tonga efa ho iray tapitrisa tany Quebec.
"Ny fifanarahana nambara androany dia dingana iray manatsara ny ho avy sy ny fampandrosoana ny fizahantany any Quebec, satria ahafahana mampifanaraka ny rafitry ny hetra amin'ny toekarena fiaraha-miasa sy nomerika vaovao," hoy i Julie Boulet, minisitry ny fizahan-tany sy ny minisitra tompon'andraikitra amin'ny ny faritra Mauricie. “Ny resaka fifanarahana dia tsy vitan'ny hoe miompana amin'ny olan'ny indostrian'ny fizahantany ihany, fa hiantoka ihany koa ny fifaninanana ara-pahasalamana eo amin'ny sehatry ny fizahantany fizahan-tany. Zava-dehibe ny fidirana ho mpikambana sy ny fanajana ny toekarena iaraha-miasa. Ho fanampin'izany, io fararano io dia mikasa ny hanazava ireo singa sasantsasany izay tokony hanangana fifandraisana misy eo amin'ny toekarena iaraha-miasa sy ny hetsika ara-barotra tanterahina eo amin'ny sehatry ny fizahantany amin'ny alàlan'ny fanolorana fanovana amin'ny torolàlana ankehitriny.
Background - Airbnb any amin'ny Faritanin'i Quebec:
• Karama isan-taona ho an'ny mpampiantrano Airbnb mahazatra: $ 2,600 $
• Isan'ny mpampiantrano mavitrika: 22,300
• Alina natolotra isan-taona ho an'ny lisitra mahazatra: 38
• Fanangonana hetra fizahan-tany: 2016 tapitrisa dolara CAD ho an'ny faritanin'i Quebec ny hetra voaangona rehetra ho an'ny 3.7
• Fahatongavan'ireo vahiny: Tamin'ny taon-dasa, efa ho iray tapitrisa ny fahatongavan'ireo vahiny tonga tao Quebec tamin'ny Airbnb